bigbasket - Online Grocery Shopping App 4.9.15 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.9.15 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း bigbasket - Online Grocery Shopping App
bigbasket - Online Grocery Shopping App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
bigbasket is India’s leading online supermarket shopping app, trusted by6million+ happy customers and counting! Shop anytime, anywhere fromavast range of 20,000+ products including farm-fresh fruits and vegetables, groceries, home & household essentials, pet care needs, organic products, beauty and hygiene, imported and gourmet & more at the best prices. Enjoy hassle-free online grocery shopping and home delivery at justaclick ofabutton. New to bigbasket? Here’saflat Rs. 200 cashback on your first order above Rs. 1000. Use voucher code MYFIRST200.
* Fast and Secure Checkout: Pay by cash-on-delivery, net-banking, credit and debit cards options and e-wallets. Most days we have great offers on multiple payment options including Paytm, HDFC Bank, Citi, ICICI Bank and many others.
bigbasket6သန်း + ပျော်ရွှင်ဖောက်သည်များနှင့်ရေတွက်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်အွန်လိုင်းစူပါမားကတ်စျေးဝယ် app ကိုပါ! အကောင်းဆုံးကိုဈေးနှုန်းများမှာအစားအသောက်ဆိုင်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုလယ်ယာ-လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပါအဝင် 20,000+ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကနေအချိန်မရွေးစျေးဝယ်အိမ် & အိမ်ထောင်စုအခြေခံလိုအပ်ချက်များ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်, အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ, အလှနှင့်သန့်ရှင်းရေး, တင်သွင်းခြင်းနှင့်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် & ပို။ ခလုတ့်ကလစ်မှာလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့အွန်လိုင်းကုန်စုံစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်နေအိမ်ပေးပို့ခံစားပါ။ bigbasket မှနယူး? ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ရူပီးပါပဲ။ ရူပီးအထက်တွင်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမိန့်အပေါ် 200 cashback ။ 1000. အသုံးပြုမှုဘောက်ချာကုဒ် MYFIRST200 ။
လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပါအဝင်ထုတ်ကုန်၏ * တစ်ခွင်အကွာအဝေး: Aashirvaad, Amul, Bisleri, Cadbury, Complan, Fresho, Haldiram, ဟိမဝန္တာ, Horlicks, Kellogg ရဲ့, ရေးသားထားပါတယ်အပါအဝင် 1000+ အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖြတ်ပြီး 20,000+ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စုစည်းရာမှရှေးခယျြပါ , Lizol, Nandini, Nescafe, Nivea, Nutella, Patanjali, Saffola, Sunpure, Surf Excel, Vim, Zespri အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ ထိုအဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့လယ်သမားများထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ, လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးရှိသည်!
* အနိမ့်စျေးနှုန်းနှင့်ကြီးမြတ်ကမ်းလှမ်းမှုခံစားကြည့်ပါ: အထူးလျှော့စျေး, အစုအဝေးကို pack ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာ, ပရိုမိုးရှင်းများအပါအဝင်အကြီးကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူအနိမ့်စျေးနှုန်းများမှာဝယ်ပါ။
* အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလုံလုံခြုံခြုံထွက်ရန်: ငွေသား-on-ပေးပို့, အသားတင်-ဘဏ်လုပ်ငန်း, ချေးငွေနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်အတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့် e-ပိုက်ဆံအိတ်အားဖြင့်ပေးချေပါ။ အများစုမှာရက်ပေါင်းကျနော်တို့ Paytm, HDFC ဘဏ်, City, ICICI ဘဏ်နှင့်အခြားသောသူများအပါအဝင်မျိုးစုံငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာအပေါ်ကြီးစွာကမ်းလှမ်းမှုရှိသည်။
* အရည်အသွေးကိုစိတ်ချ: ကျနော်တို့လယ်သမားကနေတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်အဓိကအများစု (ခခတော်ဝင်, ခခလူကြိုက်များတဲ့) source ။ အရည်အသွေးကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တစ်ဦးမူဝါဒကပြန်လာ "မ-မေးခွန်းများကိုမေး" ရှိသည်ဟုအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
* တွင်-အချိန်တိုင်း-အချိန်: ကျနော်တို့အချိန်မီပေးပို့ဂုဏ်ယူ ယူ. သင်သတ်မှတ်သောအချိန်ပြီးနောက်ထုတ်ကုန်မဆိုရလျှင်, သင်က 10% ပြန်အမ်းငွေခွင့်ရှိသည်။
*7ဘာသာစကားများရှာရန်: ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုအထောက်အကူခုနစ်ခုဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများပစ္စည်းများကိုရှာဖွေ။ "vendakkai" သို့မဟုတ် "bhindi" သို့မဟုတ် "မင်းသမီးကိုလက်ညှိုး" ရှာရန်ကျနော်တို့ညာဘက်အလိုအလျှောက်ရလိမ့်မယ်။
* နောက်ဆုံးမိနစ်စျေးဝယ်? အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းကနေသကြားလုံး? ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ 90 မိနစ်အမြန်ပေးပို့နှင့် (သာရွေးချယ်ရန်မြို့ကြီးများအတွက်) အထူးစတိုးဆိုင်ဟာယပူဇော်သက္ကာများနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ
* လွယ်ကူရှာဖွေရေး options များ: အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်ဘားကုဒ်ရှာဖွေရေး scan voice commands ကိုပေး, အသုံးပြုမှု filter များ: အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသောရှာဖွေရေး options တွေကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အခြား SmartBasket ၏အကူအညီနှင့်အတူသင့်ရဲ့အတိတ်ဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်စျေးဝယ်။
Ahmedabad-Gandhinagar, Anand, ဂါ / ဘန်ဂလိုဘိုပါးမြို့မှာ, Chandigarh, ချင်နိုင်း, Coimbatore, (Gurgaon / Gurugram နှင့် Noida အပါအဝင်) ဒေလီ nCr, Hyderabad Indore ကို Kanpur, ကိုလ်ကတ္တား, Lucknow, Mohali, မွန်ဘိုင်း: ကျနော်တို့ကအောက်ပါမြို့ကြီးတွေမှာကယ်နှုတ်တော်မူ Mysuru, Nagpur, Panchkula, Patna, Pune, Surat, Vadodara, Kochi နှင့် Vishakapatnam ။
တုံ့ပြန်ချက် / APP ကို ​​Suggestions:
bigbasket မှာသင့်ရဲ့စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ပြီး, ကြှနျုပျတို့ app ကိုအဖြစ်န်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုငျပုံကိုသိရန်ကိုချစ်မယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကိုတိုးတက်စေရန်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါက productteam@bigbasket.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုမေးလ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မည်သည့်သွင်းအားစုများအတွက်ကျွန်တော် customerservice@bigbasket.com, https://www.facebook.com/Bigbasketcom မှာသို့မဟုတ် 18601231000 ဖြစ်ကြသည်။
bigbasket - Online Grocery Shopping App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
bigbasket - Online Grocery Shopping App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
bigbasket - Online Grocery Shopping App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
bigbasket - Online Grocery Shopping App အား အခ်က္ျပပါ
hfk217 စတိုး 2.49k 12.52M
bigbasket - Online Grocery Shopping App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ေစ်း၀ယ္ျခင္း အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း bigbasket - Online Grocery Shopping App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.9.15
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://bigbasket.com/privacy-policy/
App Name: bigbasket - Online Grocery Shopping App
Release date: 2019-08-22 03:32:02
လက်မှတ် SHA1: B7:9E:7D:69:D9:8D:1E:86:4B:D2:92:92:A8:64:D7:6C:08:38:02:4C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): BigBasket
အဖွဲ့အစည်း (O): BigBasket
bigbasket - Online Grocery Shopping App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ